साउन ८, २०७४
देशका छवटा पद्रेशमा स्थानीय तहको चनुाव सकिइ सकेको छ र पनि देशका जनताको मनस्थिति सुध्रिएको छैन । जो चुनावमा सक्रिय थिए, जोे पार्टीका तर्फबाट खटिएका थिए, जसले आफनो विवेक तटस्थ राखेका थिएनन, ती सवैको मन विथोलिएको छ ।
किनभने, चुनाव सकिएर पनि चुनाव वाँकी छ । दुइ नम्वर प्रदेशमा चुनावको तयारी भर्खर हुँदैछ । तीनवटा ठूला दलहरुको दावा छ : दुइ नम्वर प्रदेशको चुनावमा वहुमत उनीहरुकै आउनेछ । तर, उनीहरुमध्ये कुनै एक पार्टीसंग पनि दुइ नम्वर प्रदेशमा चुनाव गराउने शक्ति छैन ।
दइु नम्वरमा त्यस्तो लकुेको राजनीतिक रहस्य के छ जसले सरकार र प्रतिपक्ष दवुै थरीलाई तर्साइ रहेको छ ? राज्यको तहबाट लगातार अपमान, शोषण र अविश्वासझेली रहेका मधेशका जनताले अहिलेसम्म आफनो देशभक्तिको परिचय दिन पाएका छैनन । मधेश–तराइको भम्रणगर्ने जो कसैले पनि यहाँका जनताले विताइ रहेको उपेक्षापूर्ण जीवनको दृश्य देखेका छन ।
मधेश आफैंमा उपनिवेश वनेको छ आफना ठाउँहरु र राज्य दुवै थरिबाट । राज्यले तिनै ठाउँको प्रतिरक्षा गर्दछ जो सरकारका आफन्त वनेका हन्छन । सामान्य जनता राज्यले तय गरेको लोककल्याणकारी सीमाभित्र कहींं पनि भेटिदैनन । यो विडम्वना होइन ।
किनभने विडम्वना यसरी प्रकट हँदुैन । कनुैपनि राज्यले जानी जानी आफनै जनतासंग भेदभावगर्न पाउँदैन । यो स्तम्भकारले आफनो चौथाइ जीवन मधेशमा विताएको छ । वितेका तीन चार दशकदेखि मधेशले सामान्य वाहेक अरु कनुै विकासको ढोका खलुेको देखेको छैन ।
मधेशको यो नियतिका लागि कनुै एक राजनीतिक दललाई दोष दिन सकिदैन । २०४६ को पहिलो राष्ट्रिय जन–आन्दोलनसम्म एकाधिकारवादी राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले मधेशको विकासलाई तिव्रता दिने नाउँमा अवरुद्ध तुल्याायो । तर, राजतन्त्र कहिले पनि मधेशको मित्र भएन ।
कारण राजनीतिक थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि संघर्षको रुपरेखा मधेशमा नै तयार हुन्थ्यो । राजनीतिक हिसावले मधेश वहुतै उद्वेलित थियो । उद्वेलन यतिसम्म चर्को भयो कि राजाको लोकतन्त्र विरोधी नीतिका विरुद्ध मधेश भूमिमा नै राजामाथि वम प्रहार भयो : पहिलो पल्ट जनकपुर र दोस्रो पल्ट विराटनगरमा ।
यी घटनापछि राजतन्त्रले मधेशको शासनमा राजनीतिक विचारका विरुद्ध चर्को नीति अख्तियारगर्न स्वाभाविक थियो ।
प्रजातन्त्रको पनुस्र्थापनापछि पनि मधेशमा विकासका उल्लेख्य काम हनु सकेनन । कांग्रेस नेतृत्वको केन्द्रिय सरकार वलियो छउन्जेल कामगर्ने गर्ने भनियो । पछि मध्यावधि निर्वाचनले कांग्रेसलाई कमजोर तुल्याइ दियो । कांगेस्र पार्टीका नाममा वनेका गुटहरुले मधेशको राजनीतिलाई सखाप पारे ।
जनकपुरधाम जस्तो शहरमा कांग्रेस कांग्रेस वीच फूटको खेती गरियो । महामना महेन्द्र नारायण निधि जस्ता नेतालाई अपमानित तुल्याउने गतिविधि भए । अहिले मधेशको समस्या चर्किदै गएका वेला कांग्रेसले आफनो महाभूल स्वीकारेको छ ।
काग्रेसले मधेशको राजनीति र विकासका मामिलामा गम्भीर ध्यान नदिंदा आपूm पछाडि परेको कवूल गरेको छ । भोलिका दिनमा पार्टी राजनीतिमा असरपर्न नदिने अठोट गरेको छ कांगेस्रले । त्यसको लेखाजोखा भोलिको दिनमा हनुेछ ।
तर, मधेशको स्थिति सम्हाल्न भनेजति सजिलो छैन । मधेशमा भौतिक पलु, पलुेसा, कल्भर्ट, कलुो र बाटोघाटोमात्र विग्रिएका होइनन, राजनीतिक संवादका लागि आवश्यक पलु, पलुेसा, कल्भर्ट, कलुो र बाटोघाटो पनि विगिए्रका छन ।
धेरै नयाँ पार्टीहरु बनेका छन पुरानै छानो खाँवो उधारेर । पछिल्लो समयमा जन्मेका मधेशका पार्टीहरु दायाँ–वायाँ विभिन्न नाममा विभाजित छन । ती पार्टीहरुले आफनो आधार सम्पूर्ण रुपले बनाउन सकेका पक्कै छैनन । तर, पुराना र ठूला पार्टीका आधारहरु ध्वस्त तल्याएका छन ।
भर्खरै गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले मधेशको हितहेर्ने आशा सवैले गरेका छन । राजपा नेपालले जनताको यो विश्वासको सम्वोधन कसरी गर्नेछ ? अहिलेका लागि हेर्नपर्ने मख्य करुा यति नै हो । दइु नम्वर पद्रेशमा स्थानीय तहको चनुाव पहिले सवै पार्टीहरुले आ–आफनो हैसियतको जाँच गरेनन भन ेसवकौ ेभविष्य संिदग्ध वन्नछे ।
यो पटकको चनुाव स्थानीय तहका्े भएपनि यसल ेमधशेबाट सवलौई राजनीतिको राष्ट्रिय परिदृश्य देखाउने आशागर्न सकिन्छ । देशमा संविधान वनेको छ ।
त्यो वनेको संविधानसंग मधेशको विमति छ । यो नै विवादको मख्ुय कडी हो । पुरै देशको संविधान वनाउन वसेका नेताहरुले यो कस्तो संविधान वनाए जसमा एउटा परुै प्रदेश र मधेशले छोेएका अन्य पद्रेशका नागरिकहरुको विमति छ ? यो विमतिलाई मेटने सहमति र प्रयत्न सत्तापक्ष र प्िरतपक्ष दवुैले गर्न चाहेका छैनन ।
सहमतिको नाममा गोहीको आँश ुचहुाएर समस्याको समाधान हुने होइन । न त विमतिको नाममा हामीले जे गर्यौं त्यही ठीक छ, अव यसमा दायाँवायाँ हँदुैन भनेर लौरो देखाउनमुा नै कनुै वुिद्धमानी छ । नेताहरुको कारणले देशको भौमिक अखण्डतालाई नै संकटमा पार्ने यस्ता कर्महरुको के अर्थ हुन्छ ? तर, देश यस्तरी नै चलेको छ ।
नेताहरुको मूढ आग्रहबाट देश सँधै चल्दैन । पार्टीहरु जतिसुकै वलियो हुन, जतिसुकै राज्य केन्द्रित हुन र जतिसुकै लोकप्रिय हुन जनताले नपत्याएको दिन राजा–महाराजा, तानाशाह, अधिनायकवाद सवैको अन्त्य हुन्छ । जनतालाई जिस्क्याएर, धम्क्याएर, तर्साएर, थनुेर, गोली ठोकेर शासकहरुको वर्चस्व वच्ने थियो भने देश अहिले यति अगाडि आइपग्ुने थिएन ।
देशमा अहिले देखिएका समस्या राजनीतिक मात्रै होइन । हामी आर्थिक रुपले यति तल गिरी सकेका छौं, यथास्थितिमा हामी धानिन सक्दैनौं । राजनीतिलाई त हामी सधुार्न सक्छौं । तर, सामाजिक विखण्डनलाई रोक्न, विभेद हनु नदिन, समाजको समावेशी चरित्र कायम राख्न हामीले गर्नुपर्ने काम धेरैछन ।
स्थानीय तहको चुनाव सकिएका प्रदेशहरुमा अहिले यही समस्या खडा भएको छ । सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा त आएको छ, तर संगसंगै सिंहदरवार पनि आएको छ । मधेशमा चुनाव हुन वाँकी नै छ । तर, यहाँ अन्यत्रका भन्दा समस्याहरु धेरै छन ।
यो अवस्थामा सामान्य मानिसको मनस्थिति स्थिर रहन सक्दैन भने यो स्वाभाविक नै हो । सामान्य मानिसको मनस्थिति जस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको मनस्थिति पनि स्थिर रहन सकेको छैन । चुनावमा भागलिने र नलिने कुरामा मधेशका नेताहरु व्दिविधामा देखिन्छन ।
जन–विद्रोह र आन्दोलनको बाटो अलमलिएको अहिलेको अवस्थामा राजपा नेपाल अँध्यारोमा बलेको मसाल बनेर अरुलाई बाटो देखाउन तयार हुनुपर्दछ ।
किनभने, अहिले सरकार, प्रतिपक्ष, व्यवसायी र सामान्य जनता, सवैले उसैको इशारा पर्खिएको छ ।अहिलेका लागि असोज २ गते चुनाव पनि हो र चुनौति पनि हो । यसको सामना राजनीतिक नियम अनसुार नै गरिनु पर्दछ ।